ဟိုး.. လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ တပုဒ်ပါ။ အိမ်ပြောင်းရင်းနဲ့ လမ်းမှာ ရေးခဲ့တာ။ ခုတော့ မှတ်စု စာအုပ်ထဲမှာ ဘော့ပင်နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ ပုံရော လက်ရေးမူရော အတူတွဲ ပြန်တွေ့တာနဲ့ တင်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ (မကေရဲ့ ဧည့်ခံပွဲ ဆိုတဲ့ ပို့စ်တခုကို အားကျလို့ပါ-း) (သို့သော်လည်း ကျနော်ကတော့ သူ့လို လက်ရေး မလှပါဘူး)
အာရုံ နောက်တယ်... ဆဲလ်ဖုန်းထဲ... ထည့်ပစ်..
အာရုံနောက်တယ်... ဆဲလ်ဖုန်းထဲ... ထည့်ပစ်...
အာရုံ နောက်တယ်... ဆဲလ်ဖုန်းထဲ... ထည့်ပစ်...
အာရုံနောက်စရာတွေချည်းပဲ... ဆဲလ်ဖုန်းထဲ... ထည့်ပစ်...
နောက်ဆုံးမှာ ဘ၀ တခုလုံးကိုပါ
အာရုံနောက်လာတယ်... ဆဲလ်ဖုန်းထဲ... ထည့်ပစ်လိုက်တယ်....
ဆဲလ်ဖုန်းက ငါ... ဖြစ်၊
ငါ... ကတော့ အလဟသကြီး ဖြစ်လို့ .....
ခေတ်ကို လူက လုပ်တယ် ဆိုပဲ...
နည်းပညာတွေကို ခိုင်းစားဖို့ တီထွင်ပြီးမှ လူတွေက နည်းပညာတွေအပေါ် မှီခိုနေရသလို ဖြစ်နေရတယ်။
ကျနော့်အဖို့တော့ ကိုအောင်သာငယ် ရေးတဲ့ကဗျာတွေဟာ ပိုပိုသဘောကျစရာဖြစ်လာတယ်။
ကဗျာကရေလည်မိုက်တယ် အန်ကယ်ရေ့ အနုပညာလက်ရာကတော့ မြောက်ချက်ဗျာ ကိုယ်တိုင်ဆွဲတယ် မူးရင်းလက်ရေးလေးနဲ့လန်းတယ် ကျနော့် ဆဲလ်ဖုန်းကိုတော့ ချောင်ထိုးထားတာကြာလှပြီး မှတ်ချင်စိတ်တောင်မရှိတော့ဘူးး အမှန်တော့ ဖုန်းကဒ်ဖိုးမရှိလို့ :)
နောင်ကျရင်တော့ နည်းပညာကခိုင်းမှပဲ ချစ်တတ်တော့မလို ဖြစ်သွားတော့မယ်.. :)
ဘာပဲပြောပြော နည်းပညာ ကင်းကွာလို့ မရတာကိုတော့ ယုံကြည်နေမိတယ်၊ စိတ်ကဖြစ်တာနဲ့ ရုပ်မှာဖြစ်ထွန်းတာ ဟန်ချက်မညီခဲ့ယင်ပေါ့။ အခုလိုမညီတော့လဲ ကဗျာတွေ ဖြစ်သွားတာပဲ မဟုတ်လား?.....
သြော်- လက်ရေးလှ ပြိုင်တယ်ပေါ့။း)
လက်ရေးက..လူကို မှန်းလို့ ရတယ်တဲ့။ မှန်းကြည့်လိုက်အုံးမယ်။ ကဗျာရှင်သည်..မော်တိုရိုလာ ဖုန်းကိုင်သော- လောကကြီးကို အမြင်စောင်းနေသော- မှင်မလိုက်သော ဘောပင်တချောင်းနှင့် ကဗျာရေးထားပါသည်။
ကဗျာလေး ဖတ်သွားတယ်ဗျာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေကတော့ အစ်ကို့ ကဗျာကို ခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်သေးဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း မြန်မာပြည်ထဲတုန်းက ဟန်းဖုန်းကိုင်တဲ့လူကို တစ်ခါတစ်ခါ အမြင်ကတ်တယ်။
ခေတ်ကို လူတွေက မလုပ်နိုင်တဲ့ နေရာပဲ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။
လူတီထွင်ထားတဲ့ နည်းပညာက အခါရလား..?
အကိုဆဲလ်ဖုန်းကို ကျနော်လာ ခိုးနိုင်သည် ...
ဆဲလ်ဖုန်းထဲ မှတ်ထားပါ အကိုကြီးရေ...
သေချာတာကတော့ ဆလ်ဖုန်းကိုတော့ လူကလုပ်တယ်ဗျာ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်
ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်ဗျ...ဆဲလ်ဖုန်းထဲမှာ အကုန်မှတ်....
ပြီးတော့ ဆဲလ်ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့ အခါ ...
နောက်ဆုံး ကိုယ်က ဆဲလ်ဖုန်း အစောင့်ပြန်ဖြစ်သွားရော...။
မနေ့ထဲက comment ရေးမလို့ ဟာ
connection က သိပ်မကောင်းတော့ အဆင်မပြေခဲ့ ဘူး
ကဗျာလေးက ကောင်းပါ တယ်..
ခောတ်သစ် လူမှု ဘ၀နဲ့ လူတွေ ရဲ့ ခံစားချက်တွေ
ပြောင်းလဲလာနေတာ ..မမတို့ လက်မခံ လို့
မြန်မာပြည်သူ အများစု ကတော့
အဲဒီ ဆဲလ်ဖုန်း ဆိုတာကြီး
ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ထဲ မှာ
မြင်ယုံပဲ မြင်ဖူးကြတာဆိုတော့ ..
သူတို့ ခံ စားနိုင်ပါ့ မလားတော့ မသိ..
ဒီကဗျာက ဘာ ဆိုလိုချင်တယ် ဆိုတာကို လေ....
ဒီကဗျာက အမျိုးအစားအသစ်ပဲ...။ ကဗျာအမျိုးအစားနာမည်က Motorolla V3i :)
မပန် - အဲလို ဖြစ်နေပေါ့ဗျာ။ ကျနော့် ကဗျာတွေကို ပိုပို သဘောကျတဲ့အတွက် မပန်ကိုလည်း ပိုပို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျား)
တူမောင်မျိုး - ဆဲလ်ဖုန်းတော့ ချောင်ထိုးရင်ထိုး နင့်ကိုယ်နင်တော့ ချောင် မထိုးထားနဲ့။
မိုးချိုသင်း - အဲလိုဖြစ်ရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မနေတော့ဘူး
ဒူကဘာ - ကဗျာက ဘေးထွက် ပစ္စည်းပါဗျာ။
မကေ - လက်ရေးလှ မပြိုင်ဝံ့ကြောင်းပါဗျာ။ မကေလက်ရေးကို အားကျတာလေး တခုပါပဲ။ ကဗျာကောင်းတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျား။
sin dan lar - ကျေးဇူးပါ။ နောက်တခါဆို လင့်ခ်လေး ထားခဲ့ပေးပါလား။
ကောင်းကင်ကို - ညီပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။ သဘောတူပါတယ်။ အကို့ကိုတော့ အမြင်မကပ်ပါနဲ့ညီရေ့။း)
သားထူး - တွေးစရာရှိတာတွေကို တွေးပစ်ကွာ..
ကိုအောင် - အဲတာကြောင့် ဒီကဗျာ ဖြစ်လာတာ ဟ ...
ကိုဝေလင်း - ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါကြောင်း။
ကိုသစ် - ကိုသစ်ပြောတဲ့အတိုင်း အတိအကျပဲ။
မမ - အထက်မှာ ကျနော့် ညီငယ် ကောင်းကင်ကို ပြောခဲ့သလိုပါ့ဗျာ။ ကျနော် သဘောတူပါတယ်။
စိတ်ဖြေရာ - အဲလိုမျိုး ဒုက္ခတွေ မကြုံအောင် လူက လူဖြစ်ရမှာနော်... ခုတော့ ...း)
အိပ်မက်နက် - အရောင်းစာရေးလုပ်ဖူးတယ် ထင်တယ် ဟုတ်လားး)
မှန်လိုက်တာနော်. တခါကဖုန်းထဲက data ပျက်သွားတာ တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ် ဒါပေမယ့်အခုထိလဲအမှတ်မရှိသေးဘူး